အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း သြဂုတ် ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း သြဂုတ် ၂၀၁၄
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း သြဂုတ် ၂၀၁၄
Posted by kai on Jul 11, 2014 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 12 comments
“ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်ပါလို့၊ မှောင်မိုက်မှာငို။
ပလ္လင်ပေါ်ကမျောက်ကလေး၊ ဆင်းတယ်လို့ပြေး၊ ဂျာအေး။
ဂျာအေးကို သူ့အမေရိုက်ပါလို့၊ မှောင်မိုက်မှာငို ……”
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှု ဆင်ခြင်ယုတ္တိမရှိ အကြောင်းအကျိုးပြ သမ္ဗန္ဓတွေမပါ ကာရံသာယူကာရေးသွားသောကဗျာဖြစ်လေသည်။
လောကတွင် ကြောင်းကျိုးစပ်ဟပ်မှုမရှိသလိုနှင့် ဆက်စပ်သံသရာဖြစ်နေသည် ဟူသည်ရှိ၏။
အကြင်တရားတို့သည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏၊ ဗုဒ္ဓသည် ဖန်ဆင်းဖြစ်လာမှုနှင့် သူ့အလိုအလျှောက်ဖြစ်တည်ပေါ်မှုကိုပယ်သည်။ အရာရာသည်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှုရှိစွာနှင့်သာ ဖြစ်ပျက်ကြသည်ကို “ဟေတုပစ္စယော” အစချီပဌာန်း၊ “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်”စက်ဝိုင်းတို့ဖြင့်ပြခဲ့သည်။
မဖြစ်ပေါ်သေးသည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးကို တည်နေစေခြင်း၊ တည်နေသည်ကို တိုးပွားစေခြင်းတို့၏ သံသရာကြီးပေတည်း။
ခေးယော့သီအိုရီ၏ Butterfly effect အရကောက်ပြောရလျှင် “ရန်ကုန် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံမှလိပ်ပြာ၏အတောင်ပံခတ်မှုသည် အမေရိကပြည်ထောင်စု မီချီဂန်တွင် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်” ဟူ၏။
Cause and Effect အရ ဆက်စပ်တွေး ဥာဏ်ပြေးကြည့်ပါစို့၊
သင်သည် နာရီနှိုးစက်ကြောင့် မနက်စောစောထ အလုပ်သို့ကားမောင်းသွားသူ (သို့မဟုတ်) ရထားစီးသွားသူဖြစ်လျှင် ထိုအဖြစ်ကို အလွယ်ပင် စိတ်ထင်ကမ္ဘာတွင်မြင်တင်ကြည့်နိုင်သည်။
နာရီနှိုးသံ ၃ချက်မြည်အစား ၅ချက်အထိစောင့်ကာ ထလိုက်သဖြင့် သွားတိုက်မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက်သန့်စင် ပုံမှန်လုပ်ရပ်တိုင်းတွင် အချိန်လွဲချော်မှု သေးမွှားစွာဖြစ်သွားပြီး ထိုထိုမျှ စက္ကန့်ပိုင်းအချိန်လေးကပင် မီးပွိုင့်မိ/လွတ်၊ ရထားမှီ/လွတ် အဖြစ်များဖြစ်သွားတတ်သည်ကို မြင်ကြည့်ပါလေ။
တချိန်တခါတွင် မိမိရှေ့စက္ကန့်ပိုင်းကျော်ပြီး မောင်းသွားသောကား တိုက်မိသည်ကို မြင်ဖူးလိမ့်မည်(သို့မဟုတ်)မိမိက တည့်တည့်ကြီးအချိန်/နေရာကိုက်ကျသည်ကို ဖြစ်ဖူးလိမ့်မည်။ ထိုယဉ်တိုက်မှုတွင်ပါသောတဖက်သူသည် မနက်လေယဉ်ဖြင့် ပဲရစ်မြို့သို့ခရီးသွားရန် လက်မှတ်ဝယ်ထားသူဖြစ်ပါမူ ထိုပြောင်းလဲမှုနှင့် သူ၏အကြောင်း-အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့သည် ပဲရစ်မြို့အထိရောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသတည်း။
၁စက္ကန့် အပေါင်းအနှုတ် အချိန်ကလေးသည် ပုဂ္ဂလိကတဦးတယောက်ချင်းစီ၏ဘ၀ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်မက ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး၏ အချိုးညီလည်ပါတ်နေမှုကိုပင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းသွားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ တခုနှင့်တခုတို့သည် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုမရှိသလိုနှင့် ရှိနေကြသည်သာဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် “ဂျာအေး”ကဗျာကို ”ပေါက်ပင်ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ်”ဆိုသော ကဗျာနှင့်လည်း ယှဉ်တွေးမြင်နိုင်သည်။
ပေါက်ပင်ကဗျာသည် သံသရာဆက်စပ်ဖြစ်မှုကို အကြောင်းအကျိုးနှင့်ဆီလျှော်အောင် ရှင်းပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏။သံသရာစက်ဝန်းလည်နေမှု သဘောမှာမူတူညီပါ၏။
အဆက်မပြတ်တရစပ် ဖြစ်ခြင်း လည်ပါတ်နေခြင်းဟုဆိုသည်။ သံသရာ၏ အမြုတေသဘောကို (ပရိုတွန်အားပါတ်နေသောအီလက်ထရွန်)အက်တမ်(ပရမာအနုမြူ)မှသည် ရုပ်နာမ်၏ ဥပါဒ်-ဌီ-ကိုယ်ခန္ဓာ၊ သစ်ပင်တောတောင်၊ နိုင်ငံကမ္ဘာ၊စကြာဝဠာအထိ သက်ရောက်ကြည့်နိုင်သည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကမူ နာမ်မှသည် ရှေ့-နောက် သိန်းသန်းချီဘ၀များသည်များအထိပင် ဆွဲဆန့်ကြသည်။
သံသရာဖြစ်ပျက်ဖြစ်စဉ်ကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်းပေါ်တင်လျှင် ထိုလူသား၏ ဤဘ၀၀ယ် ရုပ်နာမ်အစဉ်သံသရာ ဘယ်ဟာဝင်၍ဘယ်သည်ထွက်သည်ကို အမိရနိုင်သည်။
သံသရာစက်ဝိုင်းကိုဖြတ်ရန်မှာ အကြောင်းအကျိုး ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်ရသည်ကို သိရမည်။
သိရန်မှာ အဖြစ်အပျက်များကို လက်ငင်းဖြစ်ပျက်မှု့ချည်းကြည့်ကာ အဆက်အစပ်ကွင်းဆက်ဖြတ်၍ တခုစီသာသုံးသပ်စဉ်းစားပါက အဖြေမှန်ထွက်မည်မဟုတ်။ “လိပ်ပြာသက်ရောက်မှု”ကဲ့သို့ အလွန်သေးသောအမှုကလေးကသည်ပင် မုန်တိုင်းကြီးဖြစ်နိုင်သည်အထိ အဆင်ဆင့်ဖြစ်သွားတတ်ပေရာ မူလဇာစ်မြစ်ကို ရှာရန်သိရန်မှာ လူသားတို့၏အရာမဟုတ်ဟူ၍ပင်ဆိုကြရလေသည်။
ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးတို့တွင် “ထာရ၀ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အရ”ဟုပင် ပညတ်ကြသည်။
ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစူပါကွန်ပျူတာကြီးများဖြင့် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်တို့ကို အဖြေထုတ်တွက်ချက်သည်ထက် အဆပေါင်းများစွာရှုတ်ထွေးသော ပုစ္စာတို့သည်သာဖြစ်ပါသတည်း။ သို့သော် ခေတ်၏ တိုးတက်နေသော သိပ္ပံနည်းပညာအကူအညီဖြင့် ယခုရာစုနှစ်အတွင်းတွင်ပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အရာများကို ဖွင့်လှစ်ပြနိုင်ပေလိမ့်မည်ဟု အတတ်ပြောလိုပါကြောင်း။
ပထမမြန်မာအင်ပါယာဖြစ်သော ပုဂံသည် “ညီသား နောင်မယ်”စကားအကြောင်းပြု၍ အနော်ရထာမင်းမှ စုက္ကတေးမင်းကိုလုပ်ကြံကာနန်းတက်ခဲ့သည်။ ထိုမှအစမှသည် မွန်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊ကသည်း၊စိန(ဂန္ဓလရာဇ်)၊ အယုဒ္ဓယသားများနှင့်လှည့်ပတ်စစ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာတို့သည် ရခိုင်တို့၏ ကိုးကွယ်ရာ မဟာမုနိဆင်းတုတော်ကြီးကိုလည်း အတင်းသိမ်းယူလာခဲ့ဖူးသလို မွန်တို့နှင့်စစ်ဖြစ်ချိန်တွင် မွန်ရဟန်းသံဃာထောင်ချီကို ဆင်နှင့်နင်းစေ၍သတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကနောင်မင်းသားသည်လည်း နန်းတွင်းတွင်ပင်လုပ်ကြံခံရဖူးပြီး နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်သော သီပေါမင်းသည်လည်း ညီဘွားနောင်ရင်းများကို လည်မျိုတုတ်နှင့်ရိုက်သတ်ကာ နန်းတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့အင်ပါယာတည်ထောင်သည့်အဆင့်တိုင်း အလွန်ကြီးမားသော ပြည်တွင်းစစ်ကြီးနှင့်တို့နှင့်သွားခဲ့ကြ၍ အင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်သော ခေတ်တွင် ကုလား-ဗမာရိုက်ပွဲဖြစ်ဖူးသည်။ ချစ်တီးဟိန္ဒူတို့နှင့်ချဖူးသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်တွင်တရုတ်-ဗမာအဓိဂရုဏ်းဖြစ်ဖူးသည်။
ကရင်တို့နှင့်လည်းတိုက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့လူထုသွေးသား ကျောင်းသားများကိုလည်း သတ်ခဲ့ကြဖူးလေသည်။ ကချင်၊ရှမ်းတို့နှင့်စစ်ဖြစ်နေဆဲတည်း။
လွတ်လပ်ရေးအတူတိုက်ခဲ့သော စစ်တိုက်ဖေါ် သွေးသောက်အချင်းချင်းကိုပင် ထောင်သွင်းခြင်း သတ်ပစ်ခြင်းအထိ ရာဇ၀င်ရိုင်းခဲ့သည်များကို ချင့်လျှင် ယခုဖြစ်နေသော မွတ်စလင်-မြန်မာပြဿနာ “လက်မည်း”သည်မည်သည်နည်း သိသာရန်ရှိ၏။
မွတ်စလင်သားချင်းများ မြင်ကြည့်ကြစေချင်သည်။ ခရစ်ယန်ညီနောင်များ သဘောပေါက်ကြစေချင်သည်။ ဟိန္ဒူသွေးသားများ နားလည်စေချင်သည်။
မြန်မာတို့၏ အတွင်းပဋိပက္ခသည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သော အစိုးရမင်း၊သူ၏စနစ်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်နေခဲ့သည်ကားမဟုတ်။ သက်ဦးဆံပိုင်အောက်တွင်လည်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွင်လည်းပေါ်သည်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်လည်း ထင်ရှားသည်။ ယုတ်စွ မြန်မာ့ကွန်မြူနစ်တို့တွင်လည်း အချင်းချင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်တွင်ကား အားလုံးမျက်မြင် “ဘီလူးသွားကိုလဖြဲပြသလိုတည်း”။
သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာသန်းထွန်းစာအရကောက်၍ မြန်မာတို့၏မူလဘူတမှာ စစ်ကိုခုံမင်လှသော စစ်တိုက်ကျွမ်းကျင်သည့် မြင်းပေါ်နေလူမျိုးစုများမှလာသည်ဟုယူလျှင် ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းသည် သွေးထဲမှဗီဇဟုဆိုရမည်လော။ အမုန်းတရား လက်စားချေမှု များဟူသည် လူသား၏မူလဗီဇတွင် အထူးသင်ယူလေ့ကျင့်ရန်မလို။ ပါစေမြဲ၏။ မြန်မာတို့တွင် “ထူး-ရှယ်” ဖြစ်နေပါသလော။
မူလဇာတိ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတွင် အဖြေရှာ အစဆွဲထုတ်ကြည့်ရမည်ဟု ထင်သည်။
သာမာန်ကြည့်လျှင် ယခုမြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတို့သည် အဖွဲ့အစည်းတခု လူအုပ်စုတစု၏သပ်လျှိုမှုများ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ဖန်တီးမှုများမှ လာသည်ဟု ယူဆစရာအကြောင်းများစွာရှိနေပါသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့၏ နှစ်၁၀၀၀ သမိုင်းလှန်ကြည့်လျှင် ဤသို့မြင်တော့မည်ကားမဟုတ်။ “မတူလျှင်ရန်သူ” သတ်မှတ်ခဲ့သည်များတွေ့ရမည်ဖြစ်သလို ရန်သူသတ်မှတ်ပြီးနောက်လည်း ချေမှုန်းပစ်သည်များရှိသည်ကို တွေ့ရမည်။ မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်မှသည် အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပြရလျှင် မြန်မာစစ်အစိုးရအထိ ပြည်သူလူထုကို ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ချေမှုန်းခဲ့သည်များ သမိုင်းသာဓက ထင်ရှားရှိနေသည်။
ပထမမြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်ကတည်းကဖြစ်နေသော “စစ်ပွဲများကိုရပ်ပစ်”ရန်မှာ သော့ချက်တခုတော့ရှိနိုင်ကောင်းသည်။
လူတိုင်းတွင် အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာဟူသည်ရှိ၏။ မတူကွဲပြားခြင်းဟူသည်ရှိ၏။
ထို့ကြောင့် အင်အားကြီးလူမျိုးစုက “အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ”ဟု ဟစ်၍အော်သော အသံနှင့်အတ္တကို နည်းနည်းနှိမ့်ပေးရမည်ဟု… ဟူလို။
“ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်”ဆင့်ကာဆက်ကာ လည်နေသည်ကို ရပ်ပစ်ပါ။
လူ(ယောင်္ကျား) တို.သည် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအလို.ငှာ ထိပ်ပြောင်လာခြင်းကြောင်. ဆံကေသာ ဖီးရန် ဧရိယာ ကျဉ်းမြောင်းလာသော်ငြား
မျက်နှာသစ်ရန် ဧရိယာမှာမူ ကျယ်ပြန်.လာသော အခြေအနေများစွာရှိ၏။ ထို.ကြောင့် တစ်ဖက်တွင် ကောင်းခြင်းများရှိစေကာမူ တစ်ဖက်တွင်လဲ မကောင်းခြင်းများသက်ရောက်လာပေ၏။။ ဟိဟိ ဘူမှ မန်.တာမတွေ.လို. ၀င်မန်.တာတို. ဘာတို.
ကျုပ်ဆီက ကာလယန္တယားငှားသုံးတာ အကြိမ်နဲနဲစိပ်လာသလားလို့…
သူကြီးက သူ့စာ​သေ​သေချာချာဖတ်​မဖတ်​စမ်းထားတာထင်​တယ်​။ ဒါမှမဟုတ်​​နောက်​လခရီးထွက်​ဖို့ကြိုတင်​တာ​နေမှာ။
အဲဒါ.. ပုံမနှိပ်ခင်.. ရွာထဲတင်ပြီး.. စာလုံးပေါင်းနဲ့..အချက်အလက်လက်လာညှိတာ..။
ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းပေါက်ပြီး မတ်မတ်သွားနိုင်သော လူသားတိုင်းကို တန်းတူရည်တူ သဘောထားနိုင်ကြဖို့လိုပါသည်။
လျှာပွတ်ဟု ခေါ်ရဂျင်းသီ မာမွတ်မှ အကြောင်းခံအိ.. ထို့အတူ သာမီးဒေါ်ဂလေး အရွယ်ယောက်လာဂျင်းနှင့် ကကြောင်ကြီး ကျွတ်ချိန်တံလာခြင်းသီလည်း ရှေးဘဝရေစက် ဆုံလာဂျင်း ကြောင်းကျိုး စပ်ဆက်မှု ဖျစ်ပေသတီး…
မျှစ်မကတော့ မြန်မာတွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ထင်တယ်။ မိသားစုတစ်ခုမှာတောင် တစ်ယောက်က စည်းကမ်းဖောက်ရင် အဲဒီဒဏ်ကို အားလုံးခံရတယ်။ တိုင်းပြည်ကြီးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းဆိုတာ ပိုပြီး လိုအပ်တော့တာပေါ့။ လူ့ဘောင်ကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းမှမရှိတာ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်မရှိဘူး။ ကလေးယူနှုန်း စည်းကမ်းမရှိဘူး။ မွတ်တွေကိုလည်း လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ သူတို့ကလည်း တကယ့်ပြသနာအိုးတွေ။ မြန်မာတွေကသာ အကြံမရှိတာ။ သူတို့က အကြံနဲ့။ ဒီလိုလူတွေကို စည်းကမ်းနဲ့ ထိန်းထားရမယ်။ ဘာစည်းမှ မထားဘဲ လွှတ်ပေးထားလို့ရတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကြီးကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပြန်ပြီးတည်ဆောက်စေချင်တယ်။ အရိုးစွဲနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုလည်း စည်းကမ်းနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတာပဲ။
မျှစ်မလည်း ဂဇက်ရွာကို အနည်းဆုံး ၆လလောက် ယာယီနှုတ်ဆက်ပါတယ် သဂျီးရေ။ မျှစ်မရဲ့ ဆရာက တာဝန်ပေးထားလို့ အရေးကြီးနိုင်ငံရေးစာအုပ်တစ်အုပ် ပြန်ပေးစရာရှိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ရွာကလည်း ၀င်ရခက်လို့ အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါ။
ရွာထဲအားရင် အားသလို..၀င်ဝင်တော့ စစ်ပါနော…။
ဒီဟာကတော့ ပြည်တွင်းက ကွဲပြားနေမှု့တွေကို မီးမောင်းထိုးပြချင်တဲ့သဘောပဲ…
ဒီလောက်နာဖျားနေမှဖြင့် အနာပျောက်အောင် ဆေးကု ပေါ့…။
ဘယ်သူက အနာပျောက်ချင်လို့လဲ… လို့လဲ စဉ်းစားမိတယ်…။
တောင် ဆင်ခြေ နဲ့ မြောက် ဆင်ခြေ နဲ့….
ယိမ်းတိုက်ထားသလား .. မှတ်ရတယ်…..။
အဲဒါ သူများက ခွဲနေတာထက်..
ကိုယ့်ဘာသာ အရသာခံပြီး ခွဲချင်နေကြတာမျိုးလို့ပဲ ပြောချင်တော့တယ်…။
ဒီလိုရပ်ကွက်မျိုးမှာ တစိတ်တ၀မ်းတည်း ညီညွတ် ပေါင်းစည်းကြဖို့ဆိုတာ…
ဒီရောဂါမျိုးအတွက် ဆေးနည်းက –
တစ်ခုခု နဲ့ စုချည်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်..။
အကျိုးစီးပွား ဆိုတဲ့ ကြိုးနဲ့ စုချည်ဖို့များ
“စစ်ပွဲများကိုရပ်ပစ်” ဖို့ ဝေးလို့ စစ်ပွဲတစ်ခု ထပ်ဖြစ်တော့မလား။
ငပွကြီးတော့ စပြီး သောင်းကျန်းပြီ။
ရုရှားက ပစ်လိုက်တာလို့ စွပ်စွဲနေကြတယ်။
အမြင့် အဝေးကြီး မှာ ပျံ နေတဲ့ လေယာဉ်ကိုပစ်ချဖို့ သာမာန်လက်နက် နဲ့မှမရတာ။
မပြေးသော်လည်း ကံရာရှိ ဖြစ်နေပြီပေါ့။
ခုချိန်ထိတော့ သူတို့ နဲ့ မဆိုင် သူတို့ မလုပ်ဘူး ချည်းငြင်းနေကြတယ်။
အောက်ကပစ်ချတာ ကို ဖော်လို့ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
တစ်ခြား လိုင်း တွေ က အဲဒီ ဇုံ ကိုရှောင်ပြီး ပျံ နေချိန်မှာ ဒီ မလေးရှားလိုင်း က မရှောင်ခဲ့တာလို့လဲ ဆိုကြတယ်။
ပြသနာ က မသေးဘူး ထင်ရဲ့။
အပြစ်မဲ့ ခရီးသည်များ ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ။
ဘယ်သူဘဲလုပ်လုပ် တကယ် ရက်စက်တယ်။
17 July 2014 Last updated at 19:24
There is no official closure of Ukraine airspace but Germany’s Lufthansa, Air France and Turkish Airlines are all now avoiding eastern Ukraine.
A defence expert has told the BBC that shooting downaplane at 10,000m (32,000ft) would have requiredalong- range surface-to-air missile – possibly guided by radar.
‘Thenabang’
မနေ့ ပြောခဲ့တဲ့ မလေးရှားလေယာဉ် MH17 ရဲ့ သတင်း အဆက်တွေပါ။
အဲဒီ ထဲ မှာ ခရီးသည်ပေါင်း (ဝန်ထမ်းများပါ) ၂၉၈ ပါသွားပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ မတ်လထဲ မှာဘဲ ဒီ မလေးရှားလိုင်း က MH370 မလေးရှားကနေ တရုတ် အသွား အစအန လုံးဝ ပျောက်သွားတာ မှတ်မိကြမှာပါ။
အခု MH17 ထဲ က ခရီး သည်တစ်ယောက် ရဲ့ မောင် နဲ့ ယောင်းမ က အဲဒီ MH370 မှာ ပါခဲ့ပါတယ်။
အခု MH17 ထဲ က လေယာဉ်မောင် တစ်ယောက် ရဲ့ မိန်းမ လေယာဉ်မယ်လေးက MH370 ခရီးစဉ် ကို သူ့သူငယ်ချင်း နဲ့ ဂျူတီချိန်း လိုက်လို့ လွတ် သွားခဲ့ပေမဲ့ သူ့ခင်ပွန်း ကတော့ MH17 မှာ အသက်ဆုံး သွားခဲ့ရတယ်။
မိသားစု တစ်စု ကတော့ MH17 နဲ့ လိုက်ဖို့ မမှီခဲ့ဘူး။
ဒီ လေယာဉ် နဲ့ လိုက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘဲ နေရာလွတ် အပေါ်မှာ အစား ထိုး လိုက်ခဲ့တဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ရှေ့ အနာဂါတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ် ကြိုမမြင်နိုင်တာ က random ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာလား။
ဖြစ်ရမှာ ကြိုပြီး ရှိနေပြီးသားလား။
လေယာဉ်ပျတ်ကျ ရခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ရုရှားတွေ က ယူကရိန်းစစ်လေယာဉ် မှတ်ပြီး ပစ်ချခဲ့တာလို့ ပြောနေပါတယ်။
ပျတ်ကျအပြီး သွားကြည့်ချိန် ခရီးသည်လေယာဉ်မှန်းသိတော့မှ သူတို့ လန့်သွားပြီး ဘူးခံငြင်းနေတာလို့လဲ ပြောပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မဲ့ တဲ့ လူတွေ ရဲ့ အသက်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။
အနာဂါတ် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ မောဟ၊ ဒေါသ၊ လောဘ တွေ အခြေခံတဲ့ အမုန်းစစ်ပွဲတွေ ပပျောက်ပါစေ။
ဒါပေမဲ့ အမုန်းစစ်ပွဲ တွေကတော့ ပိုပြီး များလာနေသလိုပါဘဲ။
From Facebook – Kyaw Kyaw Soe’s status.
29/7/2014 ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၌PRစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွေးနွေးကြသည် တွင်
PRစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးရန် ဦးအောင် ဇင် က ဆွေး နွေး ခဲ့ပြီး ကန့် ကွက်သူနှင့်ထောက်ခံသူ အားပြိုင်နေရာတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌက’ယခုကိစ္စသည်အလွန် ကျယ်ပြန့် ပါသောကြောင့် လွှတ်တော်မှအဆုံးဖြတ်ပေးရန်အခက်အခဲရှိပြီး’တတ်သိနားလည်သူပညာရှင်များ
နှင့်တစ်ကွ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါ၍’ ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်၍
လွှတ်တော်ကိုသ ဘောတူမတူမေးမြန်းခဲ့သည်’
ဤနေရာအထိ လေးစားမှုနှင့်အတူလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားမိသည်’ သို့ သော်စက္ကန့် ပိုင်း အတွင်းမှာပင်’ရာသီဥတုကရုတ်ချဉ်းပြောင်းလဲသွား၏
အံ့သြခြင်းနှင့်အတူ နားထင်ကြောတွေထောင်တက်လာ သလိုခံစားလိုက် ရသည်’ သြော်..ယောင်္ကျားကြီးတန်မဲ့ နဲ့ဟူသောအ တွေးပါဝင်ရောက်သွားတော့သည်’
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ’အဆုံးဖြတ် ရခက်သောကြောင့်ကော်မရှင် ဖွဲ့၍ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး လွှတ်တော်ကို သဘောတူမတူမေးမြန်းပုံမှာ သြချ ဖို့ ကောင်း၏..
”PRစနစ်ကျင့်သုံးရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင် ဖွဲ့၍ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သော ကြောင့် ဦးအောင် ဇင် ရဲ့
အဆိုကို လွှတ်တော်မှသ ဘောတူပါလားခင် ဗျား”
…၃ ကြိမ်မေးမြန်းရာ သ ဘောတူပါတယ် ဟူသော အသံကြီးကိုကျယ်လောင် စွာကြားလိုက် ရသည်
ကန့် ကွက်မဲ့သူရှိပါသလားခင် ဗျား ဟုမေးပြီး .ထောက် ခံကြောင်းအတည်ပြုမည်အလုပ်တွင် အ မေစုသည် မတ်တပ် ရပ်လိုက်ပြီးကန့် ကွက်လိုက်သည်’
အ မေစုမတ်တပ် ရပ်လိုက်သည်နှငိ့ အခြားကိုယ်စားလှယ်အတော်များများနှင့်အတူ တပ်မ တော်သားကိုယ်စားလှယ် ၃ဦးကပါထ၍မတ်တတ် ရပ်ပြီးကန့် ကွက်သည်
ကြည့်ရသည့်မြင် ကွင်းမှာအနည်းအငယ် ရုတ် ရုတ် သဲဖြစ်သွားသည်
‘ဘာကြောင့်မှန်းမသိရ’တပ်မ တော် သား ၂ဦးသည် မူလ နေရာမှ ရှေ့သို့ ထွက်လာပြီးလွှတ်
တော်ဥက္ကဌ နှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ရှိနေ ရာကွတ်လပ်သို့ ထွက်ပြီးမတ်တပ် ရပ်နေသည်
မည်သည့်ပါတီကဟု မသိရ သော အရပ်သားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်
စားလှယ်များအကြားရှိလူသွားလမ်းသို့ ထွက်လာပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီးဘောပင်ဖြင့်ရေးလိုက်ဘယ်ကြည့် လိုက် ညာကြည့်လိုက်ဖြင့် ဘာတွေလိုက်မှတ်နေသည် မသိပါ’
ဤမြင် ကွင်းကိုကြည့်နေစဉ် ကင် မရာကို ရွှေ့ ပြီးမြင် ကွင်းကို ပြောင်းပစ်လိုက်သည်’
”အ မေစုက လွှတ်တော်ဥက္ကဌကို မေးမြန်းသည်မှာ
ဥက္ကဌကြီး မေးသွားခဲ့တဲ့ သ ဘောတူ မတူ ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ
‘PR စနစ်ကျင့်သုံးတာနဲ့ကော်မရှင် ဖွဲ့တာ ဘယ်ဟာကို သဘောတူမတူ မေးမြန်းတာဖြစ်ကြောင်း မရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ပြန်လည် မေးမြန်းပါရန်နှင့်…
ကျွန်မတို့ ကလည်း ဘယ်ဟာကို တိတိကျကျမေးမှန်း
မသိပဲနဲ့ ထောက်ခံခြင်း’ကန့် ကွက်ခြင်းလုပ်ဖို့ အလွန် ခက်ပါတယ်”
ဟူ၍ပြောလိုက် ရာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌသည် အမူအရာပျက်သွားသည်အထိ ရှိုးတိုးရှန့် တန့် ဖြစ်သွား
ဦးအောင် ဇင် တင် သွင်းသောအဆို၌ PRစနစ်ကိုကျင့် သုံးသင့် ကြောင်းအဆိုသာပါ၍’ ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန်ကိစ္စမှာ ဥက္ကဌ၏ ပြန်လည်တင်ပြချက်ဖြစ်သော်လည်း’ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်ရန် ဦးအောင် ဇင် မှတင် သွင်းသည်ဟု မလိမ့်တစ်ပတ် ပြောပြီး’အောက်ပါတိုင်းမေးမြန်းသည်
”ယခု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီးဆုံးဖြတ် ရ မှာဖြစ်တဲ့အတွက်’ ဦးအောင် ဇင် ရဲ့အဆို ကို လက်ခံ ပါသလားခင် ဗျား”ဟူ၍ဖြစ်သည်
ဦးအောင် ဇင် ကPR ကျင့်သုံးရန်ပဲတင်ပြတာဖြစ်သည်
ကော်မရှင် ကိစ္စ’လုံးဝမပါ ပါ’
အဲဒါကိုနားမလည်ပဲ အ ပေါ်ယံနားထောင်ပြီး ထောက်ခံ လိုက်ပါက PR စနစ်ကျင့်သုံးတာ ကိုလွှတ်တော်က ထောက်ခံပေးသည်ဟူသောအကွက်သို့ ရောက်အောင်
ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်’အလွန်အ ရေးကြီး၍တစ်ကွက် အမှားမခံနိုင်သောအ ခြေအ နေဖြစ်သည်
ထိုအခါလွှတ်တော်ဥက္ကဌသည်အနည်းငယ် ရှက်သွားဟန်ဖြင့် ဦးအောင် ဇင် သို့ ကြည့်ကာလှမ်းပြောသည်
ကော်မရှင် ဖွဲ့ရန်ကိစ္စ သည်ဦးအောင် ဇင် တင် သွင်း သောအဆို၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ်၌ပါပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်
ဖတ်ကြားပြရန်ပြောပြီး’အသံဖိုင် ပါပြန်ဖွင့် ပါဟုပြော သည်’
သို့ သော်အင် မတန် ရီစရာဖြစ်သွားသည်’
ဦးအောင် ဇင် က ထိုစာရွက်စာတမ်း ပါမလာပါဟုပြော ပြီး ဘယ်ကြည့် လိုက် ညာကြည့် လိုက်နှင့် က လေး တစ်ယောက် အမူအယာမျိုးဖြင့်မချိသွားဖြဲ ပုံစံလုပ်နေ သည်’
အသံဖိုင် ကို လည်းပြန်ဖွင့်မပြပါ
လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ပြောတာက ဦးအောင် ဇင် အခုတင် သွင်းတဲ့အဆိုရဲ့နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးရန်ပါတယ်လို့ ပြောပြီး’အဲဒီ ဦးအောင် ဇင်
ကို ပြန်လည်ဖတ်ကြားခိုင်းတော့ စာရွက်စာတမ်းပါမလာ
ရှက်တတ်တဲ့သူဆိုလျင် နေရာမှာ လဲ သေ သွားလောက် အောင်’လူမိသွားခြင်းဖြစ်သည်
အ မေစု၏ မျက်နှာမှာလည်း…ယောင်္ကျားကြီးတွေတန် မဲ့နဲ့…ဟူသောအ တွေး ဝင် သွားသည်လားမသိပါ
ခံပြင်းခြင်း’ ရွံရှာခြင်း’အထင်သေးခြင်း’ဒေါသထွက်ခြင်း ဟူသောပုံရိပ်ကိုအထင်းသားတွေ့မြင်နေရသည်
ထိုကဲ့သို့ အ ခြေအတင်ဖြစ်နေစဉ် No Signalဟူ သောစာတန်းပေါ်လာပြီး အကျင့်ယုတ်ပါတော့သည်
ကြည့် မရ တော့ပါ’sky net တွင်ဖြစ်လားမဖြစ်လား တော့မသိပါ ကျွန်တော်က digital box ဖြင့်ကြည့်
တာဖြစ်ပါ သည်။ ။
အ မေစု သာအကွက်မ စေ့ပါက ဤအဆို တစ်ချက် တည်းဖြင့်ရှင်းရန်အလွန်ခက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်
…သြော်…သြချ ရ လောက်တဲ့ယောင်္ကျားရင့်မ ကြီး တွေပါလားဗျာ..